भर्खरै दाङबाट आयो सबैलाई रुवाउने घटनाको खबर ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > भर्खरै दाङबाट आयो सबैलाई रुवाउने घटनाको खबर !
admin September 29, 2018 समाचार 0
दाङमा माटोको ढिस्कोले पुर्दा एकै घरका तीन जनाको मृत्यु भएको छ।राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ४ दोलाई खोला निवासी १२ वर्षीया रोजिना चौधरी, ३० वर्षीया श्यामकुमारी चौधरी र ३५ वर्षीया मिना चौधरीको मृत्यु भएको दाङ जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता रामप्रसाद घर्तीले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए ।डिएसपी घर्तीका अनुसार शनिबार दिउँसो १ बजेतिर दसैँमा घर लिप्ने माटो खन्न गएका उनीहरूलाई माटो खन्दै गर्दा ढिस्कोले पुरेको थियो।तीनै जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको डिएसपी घर्तीले जानकारी दिए
नवलपरासी । शनिबार बिहान बस दुर्घटना भएको छ । दुर्घटनामा परी २ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३२ जना घाइते भएका छन् । घाइते मध्ये ११ को अवस्था गम्भीर रहेको नवलपरासी प्रहरीले जनाएको छ । बस शनिबार बिहान पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्र्तगत नवलपरासीको कावासोती बिहान साढे ३ बजे दुर्घटनामा परेको हो । नेपालगंजबाट काठमाडौंका लागि छुटेको ना ७ ख ५६ २९ नम्बरको बस विपरीत दिशाबाट जाँदै गरेको ना ६ ख ७७१९ नम्बरको ट्रकसँग ठोक्किँदा दुर्घटना भएको हो ।
दुर्घटनामा परि बस चालक बाँके कोहलपुर नगरपालिका ४ बस्ने २३ वर्षका सुरज विक र बर्दिया वाणगंगा गाउँपालिका २ बस्ने २४ वर्षका लक्ष्मण थारुको ज्यान गएको प्रहरीले बताएको छ । दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते भएका ११ जनाको भरतपुरमा, ४ जनाको मध्यविन्दु अस्पताल डण्डा र १७ जनाको कालीगण्डकी अस्पताल कावासोतीमा उपचार भइरहेको छ ।